Paraula clau Paunopinda uye makwikwi ekutsvakurudza, kunyora kana kupinza vanyori, uye kusika kukosha-kuwedzera mifananidzo – zvaunofunga zvingangodaro xemeneia chekutsvaga kwako kukuru. Zvinongonzwisisika kuti iwe unofanirwa kuwana quilometratge yakawanda inogona kubva pane zvaunofunga.
3.1 1. Rondenament de Nyora
3.4 5. Gadzira an Infografia
Penny Sansevieri, CEO de WeActor Marketing Experts, akati,
Zvechokwadi, mari yaunoponesa ichasiyana, zvichienderana nemari. Unyanzvi hwevanyori vanokushandira hunosiyana-siyana. Iwewo unogona kubhadhara mazinga muhutano hwakawanda kubva kune mumwe mushanyi wega wega blogger post $ 100 kana zvimwe zvechigadzirwa chechigadzirwa. Mamwe mapepa akachena uye maitungamiri anodhura zvakawanda.
Mutengo wekopi kunyora zvichibva paIndwork Top 100 de perfils autònoms. Avhareji si molt bé = 30 $ / espera; yakakwirira = 200 $ / espera, yakadzama = 9 $ / mes.
Ngatiti iwe une munyori uyo unobhadhara kuti ugadzire zvemukati ndiani ane ruzivo uye musoro wenyaya hauna hunyanzvi zvakanyanya kana zvakadzama. Tenim unomubhadhara $ 50 / chinyorwa cheiyo basa. Wedzera kune izvo zvinodhura mashoma masitoko mifananidzo pazinenge $ 1,00 per nou. Uye zvakare, iwe wakamboshandisa imwe mari kushambadzira, imwe nguva uchitsvaga misoro yepamusoro uye mazwi akakosha, uye pamwe wakabhadhara mupepeti imwe mari kupurinda chidimbu kusvika mukukwana.
Kunyangwe iwe ukaita basa rese uri wega, richine kukosha rimwe chetero. Wakatoshandisa nguva yako pachinzvimbo chemari chaipo paunoita zvese zvebasa iwe pachako. Zvagara zvichitaurwa kuti "nguva imari", saka tichaenda nehuwandu uhu. Ngatitii mutengo wako unofungidzirwa wechinyorwa ichocho 100 dòvids.
Kana iwe ukadzokororazve chinhu ichocho gare gare, unochengetedza iyo $ 50 yekubhadhara mari, iyo $ 3 mumifananidzo, uye mubhadharo wekugadzirisa. Iwe zvakare chengetedza nguva nekuti haufanirwe kuita hwakawanda kutsvagisa nguva ino kutenderera.
Zvino, ngatiti iwe unowana kupfuura nzira imwe yekudzokorodza chinangwa ichocho. Iwe uchangobva kuchengetedza mari exponencialment.
Kana bhaibheri rako rave iripo kwechinguva, iong unogona kunge une toni yezvakagadzirwa zvekare kutarisa. Zvinogona kuva zvakaoma kuziva kuti chii chakakosha kudzokera pakutanga.
Shaley McKeever, WeStategic Growth Manager de Dhizha ReMashizha eMapazi aiva nemafungiro ekunakisisa pakusarudza izvo zvinyorwa zvekudzorera zvakare.
"El procés d’optimització històrica de l’Iti takangotanga kuita chiito chinonzi. Zvose pamusoro pekutora yako yekare, yepamusoro-yepamusoro yehutano uye yekuvandudza iyo kuti ichengetedze-uye-kuwedzerwa uye iwedzere kutendeuka. "
Nhanho yako yekutanga yekuona kuti ndeipi yekugadzirisa-chinangwa chinofanirwa kuve yekudzidza yako saiti yekudzosera analytics uye kuona kuti chii chiri kuwana iyo yakawanda traffic. Kutanga nezvinyorwa kubva pagore rapfuura uye wozoshanda nzira yako yekudzoka. Enda kune yako yekudzora panelere uye kune Metrics chikamu sezviri kuratidzwa pazasi.
Sarudza WebTP Falsalitzador conjuntament amb funcions diferents. Zvichienderana neCPanel musoro waunoshandisa, yako chiratidzo chinogona kutarisa zvakasiyana.
Dzvanya panell Webalizer FTP. Iwe uchapihwa mushumo. Pazasi pane mufananidzo wesaiti mutengi wangu akatanga kutanga makore mana apfuura mumwedzi yekutanga. Unogona kuona kuti ndinga tarisa sei pazvitupa zvakazara wobva wadzvanya chero mwedzi kuti uwane zvimwe zvakawoneka estadístiques (zvimwe pane izvozvo muminiti). Ndakadzora zita rezita kuchengetedza zvakavanzika zvevatengi.
Aya ndiwo mazita ehuwandu lloc web de paIndaneti.
Trànsit tevere iwe unogona kudzvanya chero yemwedzi kuti uwane zviri nani zvinyorwa zveapi zvinyorwa achiri trànsit de kuwana. Nechinangwa chekuongorora uku, iwe unoda kutanga nemwedzi ichangopfuura mumishumo yako uye wozodzoka musure memwedzi mishoma. Tsvaga pasi kuma URL epamusoro uye uchaona kuti ndeapi mapeji akawana zvakanyanya.
Nhanho yako inota la recuperació de Google Analytics. Kana usiri kushandisa webmaster zvishandiso kuGoogle, unofanirwa kunge uri. Izvi zvinogona kukupa iwe yakadzama ruzivo rwekuti vashanyi vako vanobva kupi uye maitiro evita panel yako saiti.
Ngatitarisei mushumo kubva kune imwechete nguva imwechete iyo mutengi iyeyeye ine new site.
Cherechedzai kuwedzera kwechikwereti? Ouch. Izvi zvinogadziriswa no molt, asi, kupfuura kwenguva.
Tsvaga yako saiti nenzira imwechete yaungazoita mukwikwidzi. Tarisa pane zvese nemeso nyowani. Semuenzaniso, iong unogona kuenda kumusoro kune SpyFU.com uye nyora muzita rako rezita. Ona zvinouya semapeji ako anozivikanwa. Nokubatanidza zvitatu zvakasiyana zvinyorwa, iwe uchaibata ese ezvakakurumbira zvinyorwa izvo zvichiri zvimwe zvakada kufarirwa nevaverengi.
Kana iwe uchinge uine yakasimba zvinyorwa zvezvinyorwa zvaungafunga nezvokutsiva, enda mberi nekukanda chero zvisati zviri zvegreen. Kana iri musoro wenyaya utilitzar uchiri wakakodzera nguva inotevera, iwe zvimwe haudi kunetsekana nazvo izvozvi. Kune nguva nenzvimbo yekudzokorora izvo zvinyorwa, zvakare, asi ikozvino nekuti urikuda kutarisa panell zvinogara zviripo izvo zvichamira muedzo wenguva.
Pane nzira dzakasiyana-siyana dzaunogona kudzorerazve zvinyorwa zvekare kunze kwekunyora zvakare kana kugoverana panell zvekuchengetedzwa kwevanhu, kunyange zvazvo izvozvo zviitiko zvinokosha zvakare.
1. Rondenament de Nyora
Gadzira kutenderera kwezvakafanana zvawatumira uye nekubatanidza kumashure kune yako yekare zvinyorwa. Unweve wakawona masosi achizviita izvi nezvinhu sekubika uye nekushongedza matipi.
Els nostres 10 millors consells per a ____________
Tora zvidziro zvemufananidzo nemaspiritsi novidzidzo uye ita slidedi yekuisa SlideShare. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kusvika kune vatsva vatsva vangave vangave vasati vamboona zviri mukati mako.
Semuenzaniso, kana iwe uine chinyorwa pàgina web yako pamusoro pekuchenesa firiji paunenge uchidziya uye unotonhorera unit, iog unogona kuita vhidhiyo chaizvoizvo ichiratidza kuti ungazviita sei uye udzokere kumashure. Iwe unogona kuwedzera vhidhiyo kune chinyorwa chekare uye kubatanidza kudiiwa kuYouTube kudzokera kune iyo nyaya. Izvi zvinopa zvikamu zviviri zvehuwandu huwandu hwekutsvaga.
5. Gadzira an Infografia
IWebhu inoratidzika. Icho ndicho chikonzero nei infographics dzave dzakakurumbira. Kana muoneki ane mavara akajeka, vanhu vane 80% vakawanda vanoda kuiverenga. Ingowedzera mamwe mapepa, mifananidzo, uye uzvisungire zvose pamwe chete nemagwaro ako uye mamwe maverengera kuti uite shure.